China Peritoneal Dialysis Solution (CAPD) Yekugadzira Line vagadziri uye vanotengesa | IVEN
Peritoneal Dialysis Solution Kugadzira Line
Yedu Peritoneal Dialysis Solution yekugadzira tambo, ine Compact chimiro, inotora diki nzvimbo. Uye Dhata dzakasiyana dzinogona kugadziridzwa uye chengetera kuwelding, kudhinda, kuzadza, CIP & SIP senge tembiricha, nguva, kumanikidza, zvakare inogona kudhindwa sezvazvinodiwa. Iyo huru drive inosanganiswa ne servo mota ine synchronous bhandi, chaiyo nzvimbo. Yepamberi mass kuyerera mita inopa chaiyo kuzadza, vhoriyamu inogona kugadziriswa zviri nyore nemurume-muchina interface.
Peritoneal Dialysis Solution (CAPD) Yekugadzira Line Sumo:
YeCAPD solution kubhegi kudhinda, kuumba, kuzadza nekuisa chisimbiso, kuchera chubhu, PVC bhegi kugadzira muchina.
CAPD Dialysis yekugadzira mutsara Maitiro Ekugadzira
Bhegi Kuumba Chiteshi
Peripheral Welding neakavhurika yakavhurika muforoma dhizaini uye kudengenyeka chakuvhuvhu chakashongedzerwa pamwe kutonhora ndiro, kuita kuchinja-shanduka muforoma tembiricha, uye nechokwadi kuti michina iri Kuumbwa kwacho uye kumisa havazobiki inopisa inopisa Kamudzira zvinhu; Kuvandudza chigadzirwa mhando.
Kuchenesa pombi uye thermocouple mualuminium alloy kudziyisa ndiro, kudziyisa uye kupisa kupisa zvakafanana, kudzora tembiricha kwakanyatsoita, kwakadzora kupisa kurasikirwa, hakuzoonekwe iwo chaiwo tembiricha uye kuratidza tembiricha isingawirirane, kuitira kuve nechokwadi chekuti welding inokodzera mwero.
100% mashandisiro efirimu, hapana marara pamucheto pakati pemasaga nemapoka.
The Foroma muforoma iri zvikuru zvakagadzirirwa. Yekupedzisira yakaumbwa bhegi reyaimbova boka ichatemwa pamwechete neyekutanga yakaumbwa bhegi reboka rekupedzisira. Izvo zvakanaka pakudhonza kwefirimu kana uchitambanudza mabhegi. Imwe chete sisitimu ndiyo inogona kuvimbisa kutambanudza kwefirimu uye kutambanudza bhegi kunogona kuitwa zvinowirirana. .
Kana uchichinja muforoma kune mamwe maratidziro ezvigadzirwa, zvinongoda chete kuchinja kumusoro chakuvhuvhu, iyo yepasi muforoma inogadziriswa yakajairika muforoma, iyo inogona kuchengetedza zvakanyanya kutsiva kwekugadzirisa nguva. Achigadzira muforoma chinoitwa neakasarudzika zvinhu uye yakakosha maitiro eakasarudzika mafekhuu vagadziri, akachengetedzwa kwete mucherechedzo yemhando uye sevhisi hupenyu hwemabhegi emamirioni zana.
Bhegi Cold Joint Welding & Waste Edge Kubvisa Chiteshi
Sezvinoenderana nehunhu hwesimbi yekumonera, inotonhorera inotonhorera inofanirwa kugamuchirwa nekukurumidza kuti igadzire mushure memaviri-ekupisa tembiricha. Izvi zvinogona zvese kuve nechokwadi chekusimbisa kwepurasitiki uye kuunza chitarisiko chakanaka. Naizvozvo, iyo yechipiri yekushambadzira madoko inoda kutonhora kutonhora, iine hunyoro tembiricha yeiyo chaiyo inotonhora tembiricha yemvura (15ºC-25ºC), iyo nguva uye kumanikidza kunochinja.
Iine patent dhizaini, iyo marara kumucheto kubvisa chiteshi iri nyore uye yakavimbika, yakakwira yekupfuura mwero inosvika 99% uye pamusoro. Yekumusoro neyezasi giraidhi tsvimbo inosungira iyo tsvina firimu mushure mehombodo ichigadzira uye kuibvarura negirinda giraidhi, kupedzisa bhegi ichigadzira. Iwo mativi mativi marara anounganidzwa neakasarudzika mudziyo. Iyo otomatiki marara kumucheto kubvisa chiteshi haigone chete kudzora zvakashata mhedzisiro yekubvarura kwekugadzira, asi zvakare simbisa iyo yakanaka bhegi chimiro.
Tora iyo E + H kuyerwa flowmeter kuyerwa uye yakanyanya kumanikidza yekuzadza system.
A frequency control pombi inodzora kumanikidza, shandisa iyo yepamusoro-yekumanikidza inodzivirira yekurapa silicone pombi kubatanidza iyo pombi, nyore kugadzirisa, hapana yekuchenesa yakafa nzvimbo.
Kukwirira kuzadza kwakaringana, hapana bhegi uye hapana bhegi rakakodzera, hapana kuzadza.
Kuzadza misoro kunotora patent tekinoroji yekutsetseka kwepamusoro kwekuisa chisimbiso, kusabatana nemachiteshi interwall saka hapana kukakavara kwekugadzira iwo ma particles; inodzivirira zvakare kufashukira kwemhinduro iyo inokonzereswa neshanduko yemazamu saizi kuita kuti madoko avharwe nemisoro yekuzadza.
Magetsi Kudzora Cabinet
Inotora yepamusoro PLC kudzora uye yakasanganiswa vharuvhu terminal nzira, yakapfava dunhu, nekukurumidza kushanda kuita, yakachengeteka uye yakavimbika inomhanya. Kuzadza chikamu chakabatanidzwa nechisimbiso chikamu muchikamu chimwe chete, zvinongoda imwe yemagetsi control system uye murume mumwe muchina interface oparesheni unit; mumwechete opareta anoderedzwa, anodzivirira zvakakanganisika sekusawirirana pakati pevanoshanda vaviri, uye zvinowedzera kuchengetedzeka uye kuvimbika kwemidziyo.
Bata skrini yekuratidzira uye inoshanda zvese tembiricha kudzora nenzira kwayo. Kunyanya inopa kushanduka kudiki mukutanga uye nekumira nguva, shiviriro inogona ± 1 ℃.
Dhizaina pani yakaiswa pane aruminiyamu ndiro neS / S stud bhaudhi, dzivirira tambo yegomba yakasununguka pane iyo ndiro mushure mekushandisa kwenguva refu.
Iyo firimu roll yakamisikidzwa neyunifomu kusagadzikana kubva pamativi mana kuti ive nechokwadi chekumanikidza kwemufirimu uye kumhanya kumeso. Iyo firimu mupumburu kuruboshwe uye kurudyi mativi akagadziriswa neinogadzikiswa yekumisa ndiro, kuve nechokwadi chekudyisa kumhanya uye kunyatso.
Kuchenesa chiteshi uye kupisa kwekuisa chisimbiso chiteshi kutora chitubu-chakatakurwa tsono yekuongorora kuti uone iyo tembiricha tembiricha, iri nyore kumisikidza uye disassembly, isina kugadzikana kuputsa, kushivirira mukati me ± 0.5 ℃.
Chinja nzira yekuisa chisimbiso positioning kuti uchengetedze humburumbira, dzivisa kupisa kwenguva refu pairi.
Unyanzvi hwekunze wiring, paradzanisa waya uchitevera akasiyana akasiyana, kutaridzika kwakanaka uye nyore kugadzirisa.
Gadzirisa iyo yepasi muforoma, asi chengetedza iyo inotonhorera ndiro, kuchengetedza iyo firimu kana muchina ukavhara pasi.
Kukomberedza kupisa kwekuisa mucherechedzo kunotora yakakosha muforoma, isa iyo inotonhora ndiro yeiyo yepamusoro chakuvhuvhu ine chitubu-yakatakurwa.
Wedzera otomatiki yekudyisa sisitimu kugadzirisa dambudziko rekuvharira uye kusvetana, kuderedza kusimba kwevashandi. Wedzera ionic mhepo yekuchenesa uye yekudzosa chishandiso kusimudzira kujekesa kwechigadzirwa.
Pashure: Herb Kucherwa Kwekugadzira Line (Artemisinin kuburitsa, CBD kuburitsa)
Zvadaro: Hemodialysis Solution Kugadzira Line
Peritoneal Dialysis Solution, capd, yekugadzira mutsara, CAPD Dialysis yekugadzira mutsara
Ampoule Muchina À Coudre Led, Ampoule Machine À Coudre Bernina, Yakagadzirirwa-Syringe Machine, Pre Yakazadza Syringe Kuzadza Machine, Disposable Syringe & Tsono Production Line, Ampoule Machine À Coudre Singer,